မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: To be with My Mr.Right (2) - The Surprised Proposal
Posted by mabaydar at 4:29 PM
Even though it'sasimple and deadline proposal, we girls feel very exciting and very happy until we want to cry. Actually, we know we are going to marry with the person but we girls still want that kinds of feeling. Love the simple proposal.
1/30/2015 4:52 PM
ဟင် ဆန့်တငံ့ငံ့ ဖြစ်နေပြီ။ :((((( သဲထိတ်ရင်ဖို စောင့်မျှော်။
Yes... That's my point. We asagirl really want to feel that kind of feeling. It seems like you are free over there, first comment from you. haha... I miss you.
1/30/2015 5:02 PM
ဆန့်တငင့်ငင့် မဖြစ်ပါဘူး... တစ်ပိုင်း တစ်ပိုင်း ပြတ်တာပဲ ဟာ... အဟင့်... နောက်အပိုင်းတွေက information တွေများသွားလောက်ပြီ... ဖြစ်တယ်ဟုတ်?
ကိုယ့်တုန်းကလဲ သူများ Propose လုပ်မလားလို့ တိတ်တိတ်လေးတော့ မျော်လင့်မိသား။ ဒါပေမဲ့ တကဲ့တကယ်တော့ သူပြောတာက "နောက်တပတ်ကျရင် သူ့မိဘတွေကို ကိုယ့်အိမ်မှာ သွားတောင်းခိုင်းလိုက်တော့မယ်နော်"တဲ့။ ဒါပဲ။ ကိုယ့်မှာသာ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ "ဟမ်။ အင်း"လိုက်ရတယ်။ မဗေဒါရဲ့ Mr Right က မဆိုးရှာပါဘူး။ သူ deadline ကိုမှတ်မိသား။ ဟားဟား။
1/30/2015 5:45 PM
Haha.. Yes.. I'm free to msg you now but I still need to clean my room. No work but all are housework. Damn sianz
ဆက်ရန်.. မျှော် :)
1/31/2015 1:19 PM
2/01/2015 7:47 PM
2/10/2015 4:11 PM
ကွန်နက်ရှင်ကလဲဆိုးပါ့ကွယ် ကွန်မန့်ရှည်ကြီးပျောက်သွားပြီ ... :P
"ကတိတွေလာမပေးပါနဲ့... ကတိပေးတယ်ဆိုတာ နောင်ဖျက်ဖို့။ တကယ်ချစ်ရင် အလုပ်နဲ့ သက်သေပြပါ" ဆိုတဲ့စကားလေး ဖတ်လိုက်ရတော့ တီတင့်အခုကြည့်နေတဲ့ 'It's Okay , It's Love' ဇာတ်လမ်းလေးထဲကအတိုင်းပဲလို့ အတွေးဝင်သွားတယ်။ သဘောကျတယ်။ တကယ်တော့ မွေးထဲကပါလာတဲ့ နဖူးစာကို ဖျောက်လို့မရဘူးတဲ့လေ။
2/11/2015 10:53 AM
ဟယ်​​တော့ ဒီ connection ​တော့ နာချင်​ပြီထင်​တယ်​... comment ရှည်​ကြီး မဖတ်​ရ​တော့ဘူး​ပေါ့?... It's okay, it's love ကြည့်​​နေတာလား... ​ကောင်းတယ်​ အဲ့ကား.. မင်းသားကြည့်​ရတာနဲ့တင်​ တန်​​နေပြီ... ဟိ...
2/11/2015 2:17 PM
ပိုစ့်​ဖတ်​ပြီး ရင်​ခုန်​​ပေးတဲ့အတွက်​ ​ကျေးဇူးပါ...
2/11/2015 2:18 PM
​မေ့မှာစိုးလို့ တခါတည်း ဘ​လော့​ပေါ် ​ရေးမှတ်​ထားလိုက်​တယ်​...
မြန်​မာ​မှာက အဲ့လို proposed ​လေ့မရှိ​တော့ သူတို့က ကိုယ်​လုပ်​ဖို့ မ​ပြောရင်​သိမှာကိုး မဟုတ်​ဘူး... ဒါ​တောင်​ ဦး​လေးကြီးကစပြီး လာ​တောင်းခိုင်းမယ်​​ပြောတာဆို​တော့ ဒါလဲproposal တစ်​မျိုးပဲ​ပေါ့...
2/11/2015 2:28 PM